Warbixin: Horumarka laga dareemayo degmada Afgooye & doorka guddoomiye Najah | Najah Media Network
Bogga Hore Maqaalo Warbixin: Horumarka laga dareemayo degmada Afgooye & doorka guddoomiye Najah
Warbixin: Horumarka laga dareemayo degmada Afgooye & doorka guddoomiye Najah
Afooye Waa Degmo ka Tirsan Gobolka Shabeelaha hoose Waa Magaalo aad u Qurux badan ku Taalo Meel istaraatiiji ah Soddon km(30 km) kaga beegan Galbeedka Magaalada Muqdisho.Tirada Dadka ku Nool waxaa lagu Qiyaasaa ku dhowaad 79,400 oo Ruux.
XAAFADAHA DEGMADA AFGOOYE
WAXBARASHADA DEGMADA AFGOOYE
Sidoo kale waxa degmada Afgooye Ku yaala MCH oo hooyadda Iyo dhalaanka.
Degmadu waxey soo martay Maamulo kala duwan Mamulkii ugu Xukunka dheeraa waxuu ahaa Maamulkii Saldanada Galadi Oo ka talinayey Ku dhowaad 150 Sano laga soo bilaawo Dabayaaqadii Qarnigii 17aad ilaa 1910 Taariiqda Miilaadiga. Waa magaalo aad u Nabdoon leh dhul beeraad aad baaxad weyn.
Waa magaalo dhaqaalo ahaan iyo quruxba leh waa magaalo isku xerto ganacsiyadda Gobolka banaadir iyo Maamulka Koonfyr Galbeed Soomaaliya
MAXAA INTAASI DHEER?
Afgooye waa degmo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, Degmada Afgooye waxeey caan ku tahay sida la yaqaan istunka.
Degmada Afgooye waxaa dhexmara Wabiga Shabeelle.
Magaca Afgooye waagii hore waxaa loo yaqaanay ((Aruundaaley)) afgooye waa degmo aad iyo aad u weyn dadka dega inta badan waxay ku tiirsanyihiin beeraha & xoolaha.
AFGOOYE MAXAY CAAN KU TAHAY?
Degmada Afgooye muqdisho waxay u jirtaa 30 km kaliya wax yaalaha ay ku caan tahay waxaa ka mid ah webiga shabeealdda Hoose iyo waxay kaloo caan ku tahay beeraha waxay kaloo caan ku tahay labada buundo oo dadka degan degmada badankooda u yaqaana kal yare iyo kal weyne.
Hadaan idin fasiro waa buundada yar iyo buundada weyn :
Degmada waxay kaloo caan ku tahay doomaha looga gudbo labada gadi sida :
Raqeyle iyo dhagaxtuur dhanka kalena Baalgure iyo suuqa weyn ee hilwaaley.
Dadka degan degmada waxay aaminsan yihiin qur’aanka kariimka caruurtooda dumarkooda iyo dhalintooda iyo odayaashooda waa xaafidiin,Qur’aan
Waa dad jecel nabada iyo maamul wanaaga . Afgooye waxay ku kooban tahay sida laba geddi intaa waa hal webi: Baalgure, Raqeyle, Godey, Siigaale, Ceelqode, Daaf Eyle iyo Aaytire iyo Waanjeel intaanta isku wada duub waxaa la dhahaa (21 october).
Geddiga kalena waxay yihiin sida tan: Dhagaxtuur, Damaley iyo xaawo taako sedexdani labada Geddi waxa kala bara webiga shabeelaha hoose.
degmadani waa degmo aad iyo aad u qurxoon doogeeda iyo quruxdeeda lama qiyaasi karo ninkii tagay ayaa wax ka shegi kara oo kaliya .
AFGOOYE IYO XILI ROOBAADKAAN
Gudoomiyaha Gobolka shabeeladd Hoose hon Ibrahim Adan Ali Najah ayaa waxaa uu Shacabkiisa la qeyb saday dhibaatada iyo saameynta roobka ku yeeshay gaar ahaan Shacabak reer Afgooye oo ka mid ah Shacabka Ugu Nugul Biyaha Roobka
Waxana uu Yiri Madaale Ibrahim Adan Ali Najah “Iyadoo Roobab waa-weyn ay ka daa’yaan Guud ahaan Degmooyinka iyo deegaanadda Gobolka Shabellaha hoose, waxaan qeybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqayaa in ay ka war qabaan walaalahood uu saameynta ku yeeshay roobabka isla markaana aanan heysan hooy ay ka galaaan dhibicda roobka iyo cunno. “
Sidoo kale waxa Uu tilmaamay in “Maamulka Gobolka Shabellaha hoose iyo Maamuladda Degmooyinka iyo deegaanada waxay si dhaw ula socdaan qasaaraha ay geysanayaan roobabka iyadoo aan heegan gelinay dhamaan maaamuladda”.
DHINACA AQOONTA IYO GARAADKA BULSHADA IYO MAAMULKA
Gudoomiyaha Gobolka Shabeeladda hoose Mudane Ibrahim Adan Ali Najah ayaa waxa uu tababar u soo xeray Bulshada iyo maamulkaDegmada Afgooye 21 Bishii Octbare tababar aqoon kororsia h mar uu ka ahdlay Gudoomiye Najah Madshaasia yaa waxa uu Yiri: “”Waxaan soo xiray tabbabar 5maalin ugu socday Degmada Afgooye Maamulka degmada iyo maamulada deegaanada hoosyimaada Afgooye Lafoole,Jaziira,Sabiid Caanoole iyo Mareere.tabbabarkaan uu soo agaasimay Maamulka Gobolka Shabellaha hoose ayaan ku tayeeneynaa maamulada degmooyinka. “
“Dhamaan ka qeybgalayaasha ayaa casharo la xiriira habka wada shaqeynta ku qaatay tabbabarka iyadoo aan gudoonsiinay shahaadoyin.”
KOORMEERKA DEGMAD AFGOOYE EE GUDOOMIYE NAJAH
Gudoomiyaha ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaanka Doon-Awsuur ee Degmada Afgooye amr uu halkaasi hadalo qiimo leh uu ka jeediyay waxa uu Yiri: “Kormeer shaqo ayaan ku tagay deegaanka Doon-Awsuur ee Degmada Afgooye oo todobaadki hore lagu dilay horjooggayaal sar-sare iyo maleeshiyaad ka tirsan Shabaab,Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyed ayaa Jab-xoogan gaarsiiyay maleeshiyadi dooneysay inay car-qaladeyso amaanka deegaaanka.”
“Sidoo kale waxaan shir guddoomiyay kulan looga hadlayay amaanka guud ee Degmada Afgooye iyo deegaanada hoosyimaada. Waxaan markasta garab taaganahay Ciidanka XGDS ee u taagan difaacada Shacabkeenna.”
ISBADALKA MAAMULKA DEGMADA
Maamulka Cusub ee degmada yeelatay waa qeyb ka mid ah isbadal dhanka Maamulka oo lagu Horumarinayo degmada Afgooye waa Dadaalak hagar la’aanedy ee Gudoomiye Najah
10 BISHII OCTBAR degmada waxa ay yeelatay maamul Cusub :
Ka-dib soo jeedinteyda, Wasiirka arrimaha gudaha Koonfurgalbeed ayaa xilka ka qaaday Gudoomiyihii Degmada Afgooge halka Aweys Cabdullaahi Cumar loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee Degmada Afgooye.
Waxaan farayaa qeybaha kale ee maamulka in ay si daacadnimo ah ula shaqeeyaan gudoomiyaha cusub lana dar-dargeliyo shaqada loo hayo bulshada.
Gudoomiyaha D.Afgooye oo Odayaasha Mirifle Kala Hadlay Isdhexgalga Bulshada.
Gudoomiyha degmada Afgooye Ahna Duqa magaalada mudane Aweys Abdullahi Omar (Buulalow) Ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha Beesha mirifle ee Degmada Afgooye.
Odayaasha ayaa ugu horeyn Gudoomiyah soo gaarsiiyay salaan wexeyna usheegeen gudoomiyaha inay aad ugu farxeen soo magacaabistiisa.
Waxaana odayaasha Gudoomiyaha ka codsadeen inuu dhamaan kulan u qabto Odayaasha beelaha dega Degmada.
Maqaal horeGuddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulan la qaatay Cali Guudlaawe.
Maqaal XigaDaawo:Hon Ibrahim Adan Ali Najah oo xariga ka jaray Mashaariic laga hirgaliyey degmada Awdheegle.